Edipas mooticha - Wikisource
Dafa  ijoollee koo, irreecha keessan lafaa kaasaa
Tokkoon keessan ummata magaala kanaa waama. Waanan danda’u hundaa akkan raawwadhu itti himaa. Waaqayyoon nu gargaara. Injifannoo keenyaas ni argina. yookin  immoo injifatamuu.
Ati kan jalqabaati sin waama, intala Ziwos, Ateenaa, kan duuti hin beekne, oboleettii kee Artimeesi, handhuura gabaa kabaja kan gonfatte eegduu lafa  keenyaa, Apooloo darbataa bakakkaa balaa sin waamadhaa-sadeen keessan gaachana naa ta’aa du’a na irraa ittisaa,dura koo naa goraa. Bara isin nu gargaaru dhaabdan keenyaminni keenya jiguu eegale. Isini kan labooba dhukubaa fagootti nurraa qabaa ture. Ammas akkuma kana duraa nuu dhiyaadha.
Retrieved from "https://wikisource.org/w/index.php?title=Edipas_mooticha&oldid=389281"
This page was last edited on 19 July 2014, at 23:14.